“ဘယ်သူမှ မရိုက်ဖူးသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရိုက်ကူးသွားမယ် လို့ပြောပီးနောက် နိုင်ငံခြားမင်းသားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့ပါ ဖုန်းပြော ဆိုနေတဲ့ နေထူးနိုင်” - Grand Parents-Day
Home / Celebrity / “ဘယ်သူမှ မရိုက်ဖူးသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရိုက်ကူးသွားမယ် လို့ပြောပီးနောက် နိုင်ငံခြားမင်းသားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့ပါ ဖုန်းပြော ဆိုနေတဲ့ နေထူးနိုင်”
“ဘယ်သူမှ မရိုက်ဖူးသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကား ရိုက်ကူးသွားမယ် လို့ပြောပီးနောက် နိုင်ငံခြားမင်းသားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့ပါ ဖုန်းပြော ဆိုနေတဲ့ နေထူးနိုင်”
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုလောက ရဲ့ အက်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက် လို့ဆိုရလောက်အောင် အက်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်တဲ့ နေထူးနိုင်ကတော့ နှစ်တော်တော်ကြာကြာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေကို ရပ်နားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဇာတ်ကားတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံကျော် မင်သားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့ပါ ဖုန်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီး “ဘာတွေပြောကြမယ်ထင်လဲ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ ခန့်မှန်းခိုင်း လိုက်ပါတယ်။
နေထူးနိုင်နဲ့ ဖုန်းပြောဆိုနေတဲ့ ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာ ကတော့ နိုင်ငံကျော် မင်သားကြီးဖြစ်ပြီး သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ‘Happy. Thank You. More. Please.” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုရင် Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Audience Award ကိုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။Netflix တွင် မေလမှစပြီး ထုတ်လွင့်ပြသ ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ “When They See Us” ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။
ကွီးနေထူးနိုင် ကတော့ မကြာသေးခင် မှာ မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်(၁၀၀)တွင် ဘယ်သူမှမရိုက်ဖူးသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ ကွီးနေထူးနိုင်တစ်ယောက် နိုင်ငံကျော်မင်သားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးများရိုက်ကူးဖို့များလား။Source: Nay Htoo Naing,CRD-Cele Gabar